10 SEO Amathiphu Amawebhusayithi e-WordPress Kusukela ku-Semalt
Izinjini zokusesha zikhathalela kuphela "izinto ezithile" zobuchwepheshe ezifana namathegi e-alt, amagama wefayela,namagama angukhiye. Ukuqonda ukuthi lezi "izinto ze-tech" zisebenza kanjani zingaletha impumelelo ebhizinisini, uma ukungakunaki kungasebenza ngokumelene nawe.
I-Artem Abgarian, iMenenja Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,inikeza amathiphu abalulekile mayelana nokuthi ungabonwa kanjani kwi-intanethi ngewebhusayithi yakho ye-WordPress - fazer website gratis.
Okuqukethwe yiyona engcono kakhulu yokusebenza. Ukusebenza kusebenza kuphela uma kusekelwangokuqukethwe okuyingqayizivele nekhwalithi. Amathekisthi namagama angukhiye agcizelela isihloko sokuthunyelwe. Okuqukethwe kufanele kugxile kuzidingo zabavakashi hhayi ukuseshwaizinjini. Kumele kufundwe futhi kuqondwe.
Ukushintshanisa izixhumanisi zangemuva. Uma lokhu kushintshaniswa kwenziwa kahle futhi izixhumanisi zivela kuamawebhusayithi aphezulu aphezulu anikezela okuqukethwe okufanayo isayithi lakho, uzokunika izinzuzo ezinkulu.
Ukubeka amagama afanele kumafayela wezithombe. Ukudweba ngezithombe ezifanele kakhulu futhiimibhalo equkethwe kokuthunyelwe, i-Google ibonisa yonke imiphumela ephathelene nabo ngokususelwa kumbuzo owenziwe. Kunconywa ukusebenzisa amagama angukhiye athileokukhulunywa ngakho esithombeni, ukukhumbula ukusebenzisa amathegi we-al and tags ukuze ukwandise ukubonakala nokwenza kahle.
Izimvume ezimfushane ezifaka amagama angukhiye. Izimvume ezizwakalayo zinenzuzoebhizinisini. Ku-permalink, amagama amane okuqala kuphela afanelekile, njengoba i-Google ishiya wonke amazwi alandelayo..
izindikimba zokusesha ezilungiselelwe. Ezinye izingqikithi zewebhusayithi zisebenzisa ikhodi kakhulu ukudalaukuhlelwa nokuklama. I-Google kufanele ikhawule ngekhodi yomthombo ukudoba okuqukethwe okufanele. Ikhodi eyinkimbinkimbi kakhulu, ingaphansiokuqukethwe, kanye nokukhulunywa kwegama elingukhiye kubuyiselwe. Ukusebenza kuyisici esiyinhloko lapho kunquma ukufakwa kwesilinganiso, yingakho izindikimba ezenza ngokushesha zithuthukeIsikhundla sebhizinisi se-Google.
Yakha i-sitemap kwifomethi ye-XML. Kulula ukuthola lo msebenzi uma usebenzisaAma-plugin we-Google XML Sitemaps. Ezinye izinsiza ozisebenzisayo zibandakanya i-Website Optimizer neWebmaster Central.
Gcizelela okuqukethwe okufundisayo noma amagama angukhiye. Izihluthulelo h1-h6 zisiza ukugqamisaizihloko, imibhalo engezansi, noma imilayezo ebalulekile esihlokweni.
okuthunyelwe komphakathi. Ukuthunyelwa kumanethiwekhi omphakathi kuwukuhlakanipha kokusebenza kwe-SEO.Njengoba nje ikhuthaza inani elithile le-SEO, okuthunyelwe kufanele kube okuhlukile futhi kungabi ngebhizinisi kuphela. Kuzokusiza ukwakha ukuxhumana okukhuluphakathi kwakho nezilaleli zakho.
Ukugcinwa kumkhuba we-black hat SEO. Kuyinto engenakwenzeka ukukhohlisa i-Googlengokusebenzisa isikhwama esimnyama noma isibuko amasayithi we-HTML, njengoba i-Google izogcina izithole futhi zibeke izinhlawulo ezinkulu.
Ukusebenza ngeplanethi efanele. Gwema ukusebenzisa i-Flash njengoba ingabonakali ekusesheniizinjini esikhundleni salokho, sebenzisa iZwiPress.
I-SEO ithuthukisa ivolumu noma ikhwalithi yethrafikhi kuwebhusayithi enikeziwe. Izinjini zokusesha zisizaekufezeni lokhu ngokushayela imoto ngemiphumela yosesho "yemvelo" noma "engakhokhelwa". Inkolelo ngemuva kwalokhu yukuthi ngaphambili, noma ngaphezulu kwesayithiibonakala emgqeni womphumela, inombolo enkulu yezivakashi ezothola.